Vavaka ho an'i Santa Muerte ho an'ny asa. ? Miasa ao anatin'ny 24 ora!
Vavaka ho an'i Santa Muerte amin'ny fiasana Tena mahery izy io.
Miasa be izy raha mitady asa toy ny ilainao ny mamaha ny olana sasany izay atolotra anao any amin'ny sehatry ny asanao.
Ny hery ratsy tsapantsika, indraindray, any amin'ny toeram-piasantsika dia ratsy ary mety hisy fiantraikany amin'ny mpiara-miasa amintsika, ny lehibentsika ary ny tenantsika mivantana na ankolaka.
1 Vavaka ho an'i Santa Muerte amin'ny fiasana
1.1 Manan-kery ve ny fahafatesana masina?
1.2 Mampidi-doza ve ny milaza izany vavaka izany?
1.3 Rahoviana aho no afaka mivavaka amin'ny fahafatesana masina ho an'ny asa?
Ny Fahafatesana malalako sy malalako, miangavy anao amin'ireo teny ireo aho satria mila ny fanampianao ianao.
Any am-piasana dia mahita olana izay mahatonga ahy tsy hisalasala ny haharitra ahy.
Nahatsiaro ho an'ny voromahery mandevona sy feno fialonana aho izay te hahita ahy hidina
Mandalo fotoana tsy te-hiova aho, mila asa izay tsy mialona, ​​toerana izay ekena ny fahaizako ary afaka mijoro tsara aho. Mba hanomezana ny ankohonako ny fampiononana ilain'izy ireo.
Miangavy anao aho hitandrina ny asako, ary raha tsy afaka izany. Ampio aho hahazo fivoarana tsara. Nangataka ny andro tsy maintsy hanaovana fanadihadiana aho.
Te hahatratra ny tanjoko matihanina aho hahatsapa ho feno.
Mila asa tsara kokoa aho, karama tsara kokoa, fa ny tanjoko matihanina dia tsy misy fetrany.
Mikatsaka ny hisongadina ho tsara kokoa aho. Izany no antony hanatrehako anao, ny hatsaranao sy ny herinao dia infinito apetrako eo am-pelatananao ny olako. Misaotra anao, misaotra anao tsy misy fetra aho, mpino mahatoky anao aho.
Io fehezanteny io dia mihatra amin'ireo fotoana izay handehanantsika amin'ny dinidinika asa, rehefa saika hanao fampiharana izay efa niriantsika foana, dia manontany izay manampy antsika hahazo fampiroboroboana na fampiakarana ny karamantsika, raha mandalo fotoan-tsarotra any amin'ny toeram-piasana miaraka amin'ny mpiara-miasa ianao, boss, client na mpiasa.
Na izany na tsy izany dia hanampy anao hatrany ity vavaka ity ny zavatra rehetra misy eo amin'ny toeram-piasana rehetra.
Manan-kery ve ny fahafatesana masina?
Nohajaina tokoa nandritra ny taona maro izany, indrindra fa ny vahoaka meksikanina.
Mihamaro hatrany ny mino ary io ihany no mampiseho ny herin'ny Fahafatesana Masina.
Misy ireo mihevitra fa fanahy ratsy izany saingy tsy misy fotony raha mahita ny fahagagana sy ny fanampiana nomen'ity Masina ity ho an'izay rehetra nanatona azy hitady torolalana sy fanampiana izy.
Mampidi-doza ve ny milaza izany vavaka izany?
Ny vavaka Izy ireo dia tsy mampidi-doza.
Na izany aza, tsara ny manatanteraka azy ireo miaraka amin'ny andraikitra feno satria matetika isika mangataka zavatra tsy mety ho antsika, namana na havana.
Tanjona maloto ny vavaka satria miditra amin'ny toerana ara-panahy zato isan-jato izay tokony ho fantatsika ny tokony hihetsehana isika satria ny ratsy no mikaroka ny malemy ao amin'ny finoana.
Rahoviana aho no afaka mivavaka amin'ny fahafatesana masina ho an'ny asa?
Amin'ny fotoana rehetra, io vavaka io dia lasa fitaovam-piadiana miafina antsika amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza misy antsika.
Betsaka ny manoro hevitra hanao alitara na fanomanana ny tontolom-bavaka ary afaka manampy antsika hifantoka amin'ny ataontsika.
Na izany aza dia zava-dehibe ny fantatsika fa raha tsy manao an'izany ihany isika, dia mandaitra ary mahery ny vavaka satria vita amin'ny finoana izy io fa io no fepetra takiana tsy maintsy tanterahina amin'ny fomba tsy maintsy ananana.
Vavaka mafy sy mahery an'i Santa Muerte ho an'ny fitiavana tsy azo atao
Vavaka fangatahana ho an'i Saint-cusanian mahery